Maxaa kala haysta Al-Shabaab iyo Maamulka Shirkadda Hormuud ee Jubbooyinka? |
Maxaa kala haysta Al-Shabaab iyo Maamulka Shirkadda Hormuud ee Jubbooyinka?
Wararka ka imaanaya gobollada Jubbooyinka ayaa sheegay in Xarakada Al-Shabaab ay goysay khadadka isgaarsiinta ee labada gobol.
Weriye ku sugan Kismaayo ayaa boggan u sheegay inay isgaarsiintu go’an tahay maalintii labaad oo xiriir ah kaddib markii Al-Shabaab ay ku amartay shirkadda isgaarsiinta Hormuud inay damiso hab-dhiskeeda isgaarsiineed ee isku xira gobollada Jubbooyinka iyo Muqdisho ee yaalla degmada Jilib ee xarunta gobolka Jubbada Dhexe.
Al-Shabaab ayaa ku amartay shirkadda Hormuud inay bixiso lacag dhan $50,000, balse shirkadda waa ay ku gacan-seyrtay dalabkaas. Al-Shabaab ayaa markaas kaddib amartay in la damiyo adeegga isgaarsiinta shirkadda ee gobollada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in maamulihii shirkadda Hormuud ee Jilib Maxamuud Xaaji Salaad iyo 15 ka tirsan shaqaalaha shirkadda la xiray habeenkii Sabtida, iyagoo laga soo qab-qabtay guryahooda.
Shaqaale kale oo ka tirsanaa shirkadda ayaa ka badbaaday in la xir-xiro kaddib markii ay ka baxsadeen guryahooda ka hor inta aan la tegin guryahooda.
Amarka ay Al-Shabaab ku damisay adeegga isgaarsiinta shirkadda Hormuud ee Jubbooyinka ayaa saameeyay dhammaan magaalooyinka waa-weyn ee labada gobol, sida Kismaayo, Afmadow, Bu’aale, Jilib, Jamaame, iyo Saakow.
Maamulka KMG ah ee Jubba ayaan wali ka hadlin arrintan.
Al-Shabaab ayaa horey ugu amartay shirkadda Hormuud inay joojiso adeegga internet-ka taleefoonnada gacanta. Hormuud ayaa u hoggaansantay amarkaas, waxayna adeeggeeda internet-ka mobaylka ka joojisay dhammaan deegaannada ay ka arrimiso Al-Shabaab.